November 2017 - Page4of4- Glamorous Icon
Monthly Archives: २० कार्तिक २०७४, सोमबार ०५:४५
Home›२० कार्तिक २०७४, सोमबार ०५:४५›२० कार्तिक २०७४, सोमबार ०५:४५ (Page 4)
The preliminary audition round for the beauty pageant Miss National Icon 2017 took place in Kathmandu. The audition rounds, judged byapanel comprising choreographer Kala Subba and singer Dhaniram Rai, picked 20 girls of age group 16 to 27. Dhaniram Rai, who is also the CEO of the organizing company Bright Entertainment, said that ...
१९ कार्तिक २०७४, आईतवार ०६:४०
चलचित्र ‘लूट २’ पछि निर्देशक निश्चल बस्नेतले अन्य ब्यानरका चलचित्र, आइटम गीतमा काम गरे । निश्चलले जस्तो पनि गीतमा नृत्य गर्न थालेपछि उनी सस्तो भएको चर्चा चल्यो । निश्चलले भने साथीहरुले भन्दा नाई भन्न नसकेको बताए । अब, उनले छानेर मात्र काम गर्ने समेत बताए । उनै, निश्चल अब नयाँ चलचित्रको निर्देशन गर्ने तयारीमा छन् ...
गीतसंगीतको सफलताको मापन अहिले युटुबबाट गरिन्छ । कुन गीत कती चल्यो भन्ने जान्न युटुबमा पाएको दर्शकको संख्यालाई आधार बनाइन्छ । यही आधारमा चलचित्र ‘कान्छी’को गीतले युुटुबमा रेकर्ड नै राखेको छ । यो चलचित्रको ‘चरी चट्ट परी भुरुरु’ बोलको गीतलाई २४ घन्टामै ४ लाख बढीले हेरेका छन् । युटुबमा कुनै चलचित्रको गीत २४ घन्टामा सर्वाधिक हेरिएको ...